Sidee loo isticmaalaa kareemka wasakhaysan. Baro talaabo talaabo ah | Ragga Stylish
Marka waqtiga ugu kulul ee guga iyo xagaagu yimaado, waxaan bilaabeynaa inaan xirno dhar ka yar. Sidaa darteed, waxaan bilaabaynaa inaan ubaahano inaan lugaheena iyo garbaha wax ushaqeyno. Markii aan iska tuurno waxaan dareemeynaa maqaarka taabasho jilicsan oo aan iin lahayn isla markaana mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee tan loo heli karaa waa in la isticmaalo kareemka wasakhaysan Waxay kuxirantahay sida aan u isticmaalno waxaan heli karnaa natiijooyin wanaagsan.
Qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa sida loo isticmaalo kareemka wasakhaysan.
1 Waa maxay kareemka depilatory
2 Sida loogu isticmaalo cream cream depilatory talaabo talaabo
3 Tilmaamaha ugu muhiimsan
Waa maxay kareemka depilatory
Waa shey la isku qurxiyo oo loo isticmaalo in kiimiko looga saaro timaha aan loo baahnayn ee labada lugood, gacmaha, gumaarka, kilkilaha, barida iyo shaarubaha. Badeecadan la isku qurxiyo waxaan si fudud uga heli karnaa supermarket kasta, farmashiye ama dukaan qurxiyo. Qaaciddada ugu weyn ee kareemka wasakhaysan ayaa suurtogal ka dhigaysa in lagu dhaqmo maqaarka si aan ugu dul marno oo aan dhowr daqiiqadood u sugno. Markaad ka saareyso kareemka jilicsan, timaha ayaa lagaa saarayaa.
Waa mid ka mid ah hababka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee timaha looga baxo. Waxay ku habboon tahay gabdhahaas yaryar ee bilaabaya inay wax yeeshaan oo ay leeyihiin timo yar. Waxaa sidoo kale si weyn u isticmaala ragga doonaya inay timaha ka saaraan lugahooda tiro aad u badan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee habkani leeyahay waa inuusan xanuun lahayn.
Inkasta oo ay waxtar leedahay uma xoog badna sida isticmaalka wax, haa waa run in aan gaarno natiijooyin dhakhso leh iyo hanaan fudud.
Si loo ogaado sida loo isticmaalo kareemka dhiiga keena waa inaan ogaano in kuwa hada jira si fudud looga heli karo suuqyada waxaan kala dooran karnaa noocyada kala duwan iyo qiimaha ku kala duwan 5 ilaa 10 euro. Muddada ay sida caadiga ah mar isticmaali jireen badanaa waa kaliya 7 ama 8 maalmood. Codsiga waa mid fudud oo aan lahayn waxyeellooyin. Si kastaba ha noqotee, waxaan mar kale idin xusuusinaynaa inaysan lahayn wax saameyn ah oo ay yeelan karto wax. Kaliya hal nidaam oo xanuun badan laakiin waxtar leh. Waxaan ka saari karnaa timaha xididdada waxaanan u adkaysan karnaa timo la'aan muddo dheer.
Sida loogu isticmaalo cream cream depilatory talaabo talaabo
Kareemka daweynta ayaa si fudud u cufan. Kaliya waa inaan codsanaa oo aan ku faafinaa meelaha ay tahay inaan wax ku shaamino. Caadi ahaan, weelka sida caadiga ah wuxuu keenaa spatula ku habboon oo loo isticmaalo in lagu faafiyo kareemka loona sameeyo lakab khafiif ah. Mar alla markii aan ku kala qaadnay kareemka waxyeellada keenaya dhinaca aan dooneyno inaan ka daadanno waa inaan sugnaa inta u dhexeysa 5 iyo 10 daqiiqo. Inta lagu jiro waqtigan waxaad dareemi kartaa xoqid kooban maxaa yeelay kiimikooyinka ayaa ku shaqeynaya xididka timaha si ay uga saaraan.
In ka badan ama ka yar tani waa waqtiga lagama maarmaanka u ah kiimikooyinka ku jira kareemka inay bilaabaan inay dhaqan galaan. Markuu waqtigani idlaado waa inaan kareemka biyaha hoostiisa kujirnaa ka saarnaa durdur iyo isbuunyo jilicsan.
Maqaarka waa in si fiican loogu dhaqo biyo saaid ah lana mariyo huurka ama subag yar oo saliid ah, saliid argal, saliid geedka shaaha, ama saliidda qumbaha dabiiciga ahl. Sidan oo kale waxaan ku damaanad qaadeynaa in maqaarku uusan lahaan doonin waxyeellooyinka gardarrada ah ee kareemka wasakhaysan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan hubin doonnaa inaanan lahayn nooc caabuq ah ka dib saarista timaha.
Kareemka jirka ka daadanaya waa wax soo saar fudud oo la isticmaali karo waxtarna u leh. In kastoo ay tahay inaan isticmaalno 7-dii ama 8-dii maalmoodba mar hadana ma aha xanuun ama daalin in la isticmaalo. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo timaha aan loo baahnayn si aad u wanaagsan iyo, maadaama aysan wax xanuun ah keenin, waxaa loo isticmaali karaa meelaha jilicsan iyo xasaasiga ah sida kilkilaha iyo gumaarka. Faa'iidada ugu weyn ayaa ah in aysan ku lug lahayn ka saarista timo farsamo.
Waa run in laga yaabo in cillada ugu weyn ee ay leedahay ay tahay, in si isdaba joog ah loo isticmaalo, waxaa macquul ah inay xoogaa ka qaalisan tahay. Waxku waa mid qaali ah oo waqti dheer jira. Kaliya maahan isticmaalka yar ee laamiga marka la isticmaalo, laakiin sidoo kale saameyntu way ka dheertahay waqtiga.
Marka xigta waxaan siineynaa talooyin taxane ah oo naga caawin kara inaan u isticmaalno kareemka baabi'inta si hufan.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan tixgelinno ka hor inta aynaan u gudbin adeegsiga waa Dooro aag jirka ka mid ah oo tijaabi. Waxaan ka faa'iideysan karnaa aag yar oo aan si muuqata u muuqan si aan u helno fursad aan ku xaqiijino haddii ay ka kooban tahay kareemka ay noo keeni karto nooc ka mid ah fal-celinta xasaasiyadda. Waa muhiim in la daryeelo maqaarkayaga oo la qaado taxaddarrada noocan ah si aynaan u helin saamaynta aan loo baahnayn.
Ka dib markii la qaybiyey qaddarkan yar iyo wax yar oo jirka ka mid ah, waxaan u gudbeynaa raaci oo sug hal maalin ama laba. Haddii aysan waxba dhicin muddadan, waxay ka dhigan tahay inaynaan xasaasiyad qabin, sidaa darteed, waxaan u isticmaali karnaa kareemka 'depilatory cream' dhammaystirnaanta.
Astaamaha ugu waaweyn ee aan caadiyan leenahay haddii aan xasaasiyad ku leenahay kiimikada noocan ah waxay yeelanayaan goobooyin yaryar ama saameynta caadiga ah ee falcelinta xasaasiyadda Hadday sidaas tahay, Waa inaanu u isticmaalin sheyga duruuf kasta oo jirta.
Tilmaam kale oo aan bixinno ayaa ah inaan u isticmaalno kareemka diifta kaliya maqaarka aan dhawrsanayn. Tan macnaheedu waa haddii aan leenahay nooc kasta oo finan ah, oo bislaada, kala qaybiya, xoqitaan ama casaan laguma talinayo gabi ahaanba. Xitaa nabar yar fin ayaa ka fiican in aan la isticmaalin.
Haddii aad aadeyso xeebta oo aad waqti dheer u galeyso qorraxda, laguguma talin karo inaad isla markiiba isticmaasho kareemka wasakhda keenaya. Inta udhaxeysa qorraxda iyo isticmaalka kareemka wasakhaysan waa inay dhaafaan ugu yaraan 24 saacadood. Tani waa sababta oo ah kareemka waxaa ku jira kiimikooyin kala duwan oo noqon kara mid sawir qaad ah. Walxahaani waa waxa sababa taas, markii dambe, waxaan ku yeelan karnaa bar madow oo maqaarka ah.
Sidaad u aragto, kareemka wasakhaysan ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan oo looga saari karo timahaas xanaaqa badan. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku ogaan karto sida saxda ah ee loo isticmaalo kareemka wasakhaysan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sidee loo isticmaalaa kareemka wasakhaysan